Pokémon GO: jiilka labaad ee Pokemon ayaa la xaqiijiyay isbuucaan | Androidsis
Manuel Ramirez | | Ciyaaraha Android, Noticias, Pokémon Go
In kasta oo aan ku jirno bartamihii toddobaadka oo aan ku dhowaanno Khamiista, waxaa jira maalmo wali lagu raaxeysto mid ka mid ah cusbooneysiintaas waaweyn ee u muuqda inay taageerayaal badan ka helaan adeegyadaas, barnaamijyada iyo ciyaaraha fiidiyowga. Cusbooneysiinta joogtada ah ee codsi ama ciyaar ayaa lagama maarmaan u ah in saldhiga isticmaalaha laga dhigo mid firfircoon isla markaana uu sii socdo koriinka waqtiga.
Tan waxaa si fiican u yaqaan ragga ku jira Niantic Labs, kuwaas oo xitaa lagu qiyaasay in a jiilka labaad pokemon waxay diyaar u ahayd Pokemon GO. Hadda waa markii ay shirkaddu si rasmi ah u xaqiijisay iyadoo sheegaysa in cusbooneysiinta la daabici doono dhammaadka toddobaadkan. Riwaayad weyn oo ah ku biirayaa in badan oo ka mid ah toddobaadyadii la soo dhaafay.
Niantic ayaa si fiican u sheegay in in ka badan 80 Pokemon Jiilka qalinka iyo dahabiga ah ayaa dariiqyada joogi doona dhowaan, sidoo kale kala duwanaanshaha jinsiga gaar ahaaneed. Xitaa jiilkii ugu horreeyay ee Pokemon ee hadda la heli karo ayaa heli doona isbeddello cusub.
Marka laga reebo xayawaanada cusub ee imaan doona magaalooyinka iyo magaalooyinka, waxaa jiri doona sheeko dheeri ah oo dheeri ah ciyaarta ciyaarta. Waxay umuuqataa in Pokemon uu yeelan doono dabeecado cusub lagu daray taas horay looma arag, inkasta oo Niantic uusan rabin inuu faahfaahin ka bixiyo. Isku xirka kulanku wuxuu heli doonaa xoogaa kalgacal ah oo ka imanaya kuwa horumariya, sidoo kale waa awoodaha cusub ee kuu oggolaanaya inaad doorato Poke Balls iyo berry "duulimaadka" adigoon furin menus dheeraad ah.
Laba cusub noocyada berry Nanab iyo Pinap ayaa imaan doona ciyaarta. Midka hore wuxuu gaabinayaa Pokemon si ay ugu fududaato ugaarsigiisa, halka kan labaadna uu ku abaalmarin doono laba jeer nacnac la heli karo haddii soo-saarka xiga uu guuleysto
Waxaan heli doonaa fursado cusub qaabeynta qaab koofiyado kala duwan, Funaanado, surwaal iyo waxyaabo kale. Weli waxaa loo hayaa cusboonaysiinta ganacsiga / PvP.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Jiilka labaad ee Pokémon ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay isbuucaan